ကိုသင့်: SPDC အား မတရားအသင်း ကြေညာမည်
Posted by သင့်ကင်း at 7:00 AM
ကိုသင့် ကိုမိုးထက်နေ ksngy တို့ခင်ဗျား
နအဖ ဆန္ဒခံယူပွဲကို တုန့်ပြန်ဖို့ ဒီလိုမျိုး နအဖကို မတရားအသင်းကြေငြာမယ့်နည်းလမ်းကို ထိရောက်မှုရှိတဲ့ နည်းလမ်းလို့ယူဆပြီး အဖွဲ့အစည်းတွေကို အကြောင်းကြားစာ တောင်းခံထားတာ ဖတ်မိလို့ ဒီစာရေးလိုက်တာပါ။
အဖွဲ့အစည်းတွေကို တရားဝင်တိုက်ရိုက်လိပ်မူပြီး စာပို့ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီဘလော့ပေါ်ကနေပဲ ရေးထားတာ တခုပဲလား။
အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ပြည်ပမှာ နယ်စပ်မှာဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေပဲလား။ ပြည်တွင်းထဲက နိုင်ငံရေးပါတီတွေ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေပါ ပါဝင်ဖို့လိုိအပ်ပါသလား။
ထားပါတော့ ဒီဖက်ကအဖွဲ့တွေအားလုံးနီးပါးပါပြီး နအဖကို မတရားသင်းကြေငြာပါပြီတဲ့။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံက အက်ရှင်ယူပေးမှာလဲ။ အမေရိကန်ကလား။ ကုလကလား။ တကယ်လို့ဒီနည်းလမ်းတောင်းဆိုလို့ အင်အားကြီးတခုခုက အက်ရှင်ယူမယ်ဆိုတာသေချာရင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ(အပြင်ဖက်က) ပါဝင်ဖို့ကလွယ်မယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီနည်းလမ်းက ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုသင့်တို့ ၃ယောက်တင်မဟုတ်ဘဲ အခိုင်အမာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကို ဒီနည်းလမ်း input လုပ်သင့်ပါတယ်။
လုပ်ကြဗျာ။။ ကိုယ်နိုင်ရာ နိုင်ရာ ၀ိုင်းလုပ်ကြရအောင်။။
အမေးတွေ များသလို အဖြေတွေလည်း များမှာမို့မဖြေတော့ပါဘူး
တခုတော့ရှိတယ်ဗျ ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေရဲ့ပြဿနာက ရှေ့ က မလုပ်ရဲတာပဲ.
သူများလျှောက်တဲ့လမ်း လမ်းဖြောင့်မှ နောက်က လျှောက်ချင်ကြတာပေါ့ဗျာ
အက်ရှင်ယူမှ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုရန်သူရေ ဒီမေးခွန်းကို မမေးနေပါနဲ့ 
ဘယ်သူမှယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. နအဖ လုပ်သမျှ တရားမ၀င်ကြောင်း ကြေညာတာပါ
တခြားကြေညာချက်တွေထက်သာရင် ပိုမကောင်းဘူးလားလို့ တွေးကြည့်ပါ.
ကျနော်တို့ သုံးယောက်မကပါ နိုင်ငံရေး သမားကြီးများ အဖွဲ့ စည်းကြီးတချို့ ကို
ဒီကြားထဲက ဒီနာမည်တွေနဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့
ဖြစ်ချင်တာတော့ ကြေညာချက်တွေမထုတ်ပဲ သူ့ ဘာသာဆင်းသွားစေချင်တာပေါ့ဗျာ..
အားလုံးကို သတိပေးတဲ့ သဘောထုတ်တာပါ.. အခုဆို ပြန်လိုက်ပိတ်ခံရတာတွေရှိတယ်ဗျ